Homena An’i Petera ny Lakilen’ilay Fanjakana | Fiainan’i Jesosy
Iza ny Zanak’olona?
MATIO 16:13-27 MARKA 8:22-38 LIOKA 9:18-26
NANASITRANA LEHILAHY IRAY JAMBA I JESOSY
HOMENA AN’I PETERA NY LAKILEN’ILAY FANJAKANA
NILAZA NY HAHAFATESANY SY NY HITSANGANANY AMIN’NY MATY I JESOSY
Tonga tao Betsaida i Jesosy sy ny mpianany. Nentin’ny olona teo amin’i Jesosy ny lehilahy iray jamba, ary niangavian’ireo izy mba hikasika azy ka hanasitrana azy.
Notantanan’i Jesosy ilay lehilahy ka nentiny tany ivelan’ny tanàna. Nororany ny masony avy eo ary hoy izy: “Misy zavatra hitanao ve?” Hoy ilay lehilahy: “Olona no hitako, satria toy ny hazo no hitako nefa mandehandeha.” (Marka 8:23, 24) Napetrak’i Jesosy teo amin’ny mason’ilay lehilahy ny tanany, ka nahita tsara izy. Nasainy nody ilay lehilahy avy eo ary norarany tsy hiditra tao an-tanàna.
I Jesosy sy ny mpianany kosa nianavaratra nankany amin’ny faritr’i Kaisaria-Filipo. Lalana 40 kilaometatra teo ho eo ilay dia ary fiakarana be. Teny amin’ny 350 metatra ambonin’ny haabon’ny ranomasina ilay tanàna. Teo avaratratsinanan’izy io ny Tendrombohitra Hermona, ary rakotra lanezy ny tampony. Nety ho naharitra roa andro na mahery ilay dia.
Nitokana mba hivavaka i Jesosy teny an-dalana. Sivy na folo volana teo ho eo sisa izy dia ho faty ka nanahy ny amin’ny mpianany. Vao haingana mantsy ny maro taminy no nandao azy. Nisy koa sahiran-tsaina na diso fanantenana. Gaga angamba izy ireo hoe nahoana i Jesosy no tsy nanaiky hatao mpanjaka ary tsy nety nanao famantarana mba hampisehoana hoe iza marina izy.
Nanatona an’i Jesosy ny mpianany tamin’izy nivavaka ka nanontaniany hoe: “Lazain’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona?” Hoy izy ireo: “Ny sasany milaza hoe Jaona Mpanao Batisa, ny hafa hoe Elia, ary misy koa manao hoe Jeremia na ny iray amin’ny mpaminany.” Nisy tokoa nihevitra fa iray amin’ireo lehilahy ireo natsangana tamin’ny maty i Jesosy. Te hahalala ny hevitry ny mpianany i Jesosy ka hoy izy: “Fa ianareo kosa milaza hoe iza aho?” Tonga dia namaly i Petera hoe: “Ianao no Kristy, Zanak’ilay Andriamanitra velona.”—Matio 16:13-16.
Nilaza i Jesosy fa tokony ho faly i Petera hoe nampahafantarin’Andriamanitra azy izany. Hoy izy: ‘Lazaiko aminao fa ianao no Petera, ary eo ambonin’ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako, ka tsy haharesy azy ny vavahadin’ny Fasana.’ Te hilaza i Jesosy fa hanorina fiangonana iray izy, ary na ny Fasana aza tsy hahavita hangeja maharitra ny olona anisan’izy io raha tsy mivadika izy ireo mandritra ny fiainany eto an-tany. Nampanantena an’i Petera izy hoe: “Homeko anao ny lakilen’ny fanjakan’ny lanitra.”—Matio 16:18, 19.
Tsy midika akory izany hoe i Petera no nataon’i Jesosy ambony indrindra tamin’ny apostoly, na hoe izy no hiorenan’ny fiangonana. I Jesosy no Vatolampy hiorenan’ny fiangonany. (1 Korintianina 3:11; Efesianina 2:20) Homena lakile telo anefa i Petera. Homena tombontsoa hanampy antokon’olona samihafa mba hiditra ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra mantsy izy, ka toy ny hoe hanokatra varavarana.
Nampiasa ny lakile voalohany i Petera tamin’ny Pentekosta taona 33. Nampahafantariny an’ireo Jiosy nibebaka sy ireo niova ho amin’ny Fivavahana Jiosy ny tokony hatao mba ho voavonjy. Nampiasa ny lakile faharoa izy mba hanampiana an’ireo Samaritanina mpino hiditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Tamin’ny taona 36 kosa izy no nampiasa ny lakile fahatelo, mba hahafahan’ireo hafa firenena tsy voafora hiditra ao amin’ilay Fanjakana. I Kornelio sy ny havany ary ny namany no voalohany tamin’ireo.—Asan’ny Apostoly 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.
Nilaza i Jesosy fa kely sisa izy dia hampijaliana sy ho faty any Jerosalema, ka niady saina ny apostoliny. Tsy azon’i Petera hoe hatsangana amin’ny maty ho any an-danitra i Jesosy ka nentiny nihataka kely ary noteneniny mafy hoe: “Tokony mba ho tsara fanahy amin’ny tenanao ianao, Tompo ô! Tsy hanjo anao mihitsy izany.” Nihodina anefa i Jesosy ka nilaza hoe: “Mankanesa ato ivohoko, ry Satana! Vato mahatafintohina eo anoloako ianao, satria tsy ny hevitr’Andriamanitra no eritreretinao, fa ny an’ny olombelona.”—Matio 16:22, 23.
Niantso olon-kafa ankoatra ny apostoliny i Jesosy avy eo ary nohazavainy fa tsy ho mora ny hanara-dia azy. Hoy izy: “Raha misy te hanaraka ahy, aoka izy handa ny tenany ka hitondra ny hazo fijaliany ary hanaraka ahy mandrakariva. Fa izay te hamonjy ny ainy dia hamoy azy, ary izay mamoy ny ainy noho ny amiko sy ny vaovao tsara kosa dia hamonjy azy.”—Marka 8:34, 35.
Tsy maintsy mahafoy tena sy be herim-po tokoa ny mpanara-dia an’i Jesosy raha te ho mendrika ny fankasitrahany. Nilaza i Jesosy hoe: “Na iza na iza menatra noho ny amiko sy ny teniko, eto amin’ity taranaka mpanitsakitsa-bady sy mpanota ity, dia ho menatra noho ny aminy koa ny Zanak’olona rehefa tonga amin’ny voninahitry ny Rainy izy, miaraka amin’ny anjely masina.” (Marka 8:38) “Hamaly ny tsirairay araka ny fitondran-tenany avy” tokoa i Jesosy rehefa ho tonga.—Matio 16:27.
Nihevitra an’i Jesosy ho iza ny olona sasany? Nihevitra an’i Jesosy ho iza kosa ny apostoly?
Inona ny lakile nomena an’i Petera, ary ahoana no tokony hampiasany azy ireo?
Ahoana no nanitsian’i Jesosy an’i Petera, ary nahoana?
Hizara Hizara Iza ny Zanak’olona?